13 Shabakadaha Video-ka Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Waa run. Boggani ma aha khayraadka video kaliya ee internetka.
Inkastoo ay jeclaan laheyd in la sheego in tani ay tahay websiteka kaliya ee ku deeqaya baahida loo qabo in laga daayo sawirada fiidiyoowga, taageerayaasha iyo taageerayaasha fiidiyowga, guud ahaan maahan kiiska. Shabakada internetku waa feejignaan buuxa oo ah khayraad qurux badan oo loogu talagalay warar fiidiyoow, dib u eegis sheyga, tafaariiqda internetka, muusikada muusikada, iyo wax kaloo badan
Tababarka fiidiyowga waa meel kale oo khayraadyada internetku ay aad u badan tahay, dhab ahaantii, waxaanu ku dabooli doonaa maqaalkan kale.
Sidaa daraadeed xagee taageerayaasha fiidiyoowgu u socdaan si joogta ah, wax ka bartaan qalabkii ugu dambeeyay ee ugu muhiimsanaa ganacsiga, oo soo iibsadaan alaab badan oo aan kharash badan bixin?
Aynu si dhakhso ah u eegno daraasad darsin ah oo ka mid ah bogagga shabakada ee ilaaliya muuqaalka adduunka.
Fiidiyowga - sida odayga odayga ah ee kooxda, waxaanu ka baqi doonnaa inaanu ku darin kooxda ka soo baxa majaladda Videomaker iyo website-kooda. Ma ahan oo keliya bixiyaha wararka asalka ah ee warshadaha fiidiyowga, waxay ahaayeen kuwo si hufan ujeedadoodu tahay inay ka caawiyaan qof walba inuu sameeyo fiidiyoow fiican. Laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqayaasha si ay khibrad u yeeshaan, qof walbaa wuxuu qaadan karaa wax qiimo badan oo ka mid ah arrin ka mid ah "Videomaker", iyo boggoodii dhowaan loo cusboonaysiiyay waxay soo saartaa maqaallo maalinle ah oo ka hadlaya wax kasta oo ka soo baxa dib u eegista alaabooyinka si loo sii daayo saxafiyiinta, iyo wax walba oo u dhexeeya.
Pro Coalition Pro - Isbahaysiga Pro Pro waa kheyraad internet oo loogu talagalay kuwa raadinaya isticmaalka qalabka xirfadlaha, shaqaalaysiiyaan farsamooyinka xirfadleyda, waxayna asal ahaan ka dhigaan fiidiyow tayo sare leh. Taasi maaha in la yiraahdo in inta kale ee naga faa'iideysan karto websaydaan. Xaqiiqda ka soo horjeeda, dhab ahaantii. Kooxaha PVC ee khubarada ah waxay bixiyaan maaliyad weyn oo ah macluumaad qiimo leh oo ku saabsan wax kasta oo ka yimaada moobiilka ilaa iPhones.
Ma jiro Iskuulka Filimka - Maqnaansho Iskuulada Iskuulku waxay noqdeen Awood Xaqiiqo ah oo ku yaala qaybta wararka ee wararka, dib u eegista iyo farshaxanimada ee taageerayaasha taageerayaasha. Nidaamka fiidiyowga si joogto ah iyo qoraallo cajiib ah ayaa isku xira si aad u wanaagsan oo loo helo shakhsiyada iyo qalabka warshadaha si loo helo waxyaabo tayo sare leh.
Red Shark News - Red Shark News waa khayraad qurux badan oo loogu talagalay warar, faallooyin iyo waxyaabo kale oo badan. Falanqeeyayaal madadaalo leh, maqaallo lighthearted ah, iyo riwaayado dhiirrigeliyeyaasha fiidiyoowga ah ee dhammaan heerarka, Red Shark News waa goob loo baahan yahay buugaag.
Studio Daily - Ku bixinta warar iyo dib u eegis ku saabsan aduunka ee wax soo saarka fiidiyowga, iyo sidoo kale qoraallo shaqo oo qiimo leh, shabakadaha iyo waxyaabo kale oo badan, Studio Daily waa goob ay madaxbannaanayaal madaxbannaan iyo riwaayado waaweyn oo u baahan inay isha ku hayaan.
Adorama - Mid ka mid ah dukaamada qalabka fiidiyowga ee "Big 2", Adorama waxay leedahay qaab aad u ballaaran, waxay ku xiran tahay alaabada la cusbooneysiiyey iyo kuwa caan ah ee calaamadaha gaarka ah iyaga loogu talagalay. Nidaamka Hammer & Anvil, 24/7 bacaha, iyo nalalka Flashpoint waa qaar ka mid ah noocyada Adorama oo bixiya qalab tayo fiican leh qayb yar oo ah qiimaha tayada waaweyn.
B & H Photo Video - Halkaan joogtada ah ee tiknoolajiyada NYC-ku salaysan ee tiknoolajiyada NYC ayaa kaliya oo ay ku duuban yihiin boggooda intarnetka ah. Badeecad cusub oo la isticmaalay oo la isticmaalay, noocyo kala duwan oo noocyada wax soo saarka ah, iyo barta sare ee qoraalka ah ee B & H ku hayaan liiska ugu sareeya ee soo iibsashada fiidiyaha.
Heerka Heerka - kuwa naga mid ah ee sameeya fiidiyaha waa muusik. Muusikada waxay siyaabo badan u horumarin kartaa fiidiyoow, Premium Beat waxay bixisaa maktabad ballaaran oo tayo sare leh, qiimo macquul ah oo royalty ah oo qiimo macquul ah. Mid ka mid ah barta wax-soo-saarka video-ka ugu badan ee internetka ayaan wax u dhimi karin kiiskooda.
Jungle Audio - U adeega sida tartan ugu sarreeya Premium Beat, Jungle Audio waa website-ka muusigga ee caanka ah. Inkastoo kumanaan ka mid ah goobahaasi ay jiraan, Dhageysiga Audio-ga wuxuu si joogta ah u bixiyaa muusikada tayo sare leh qiimaha la awoodi karo oo leh dhexdhexaad fiican oo la adeegsan karo.
Xakamaynta Goobta - Haddii aad ku toogtay GoPro, iPhone ama ARRI ALEXA, abuurista muuqaal joogta ah oo dareema fiidiyoow kama dambeys ah ayaa noqon karta caqabad. Geli LUTs ama Meelaha Fiiri - Faylal si gaar ah loo sameeyey si loo xakameeyo xogta image. Ku darida LUTs si ay u siiyaan kumbiyuutaro badan oo muuqaal la mid ah farsamada ayaa inta badan loo hayaa faa'iidada. Mahadsanid, Kantaroolka Goobta ayaa abuuray badeecooyin qiimo leh oo heer sare ah, LUTs ah oo loogu talagalay kamarado farabadan oo badan, oo la isticmaali karo oo ku saabsan wax kasta oo ku habboon ama qaabdhismeedka masawirka.
EditStock.com - Iyadoo aanad shaqo helin Warner Brothers, waxay noqon kartaa mid adag in lagu barto la shaqaynta filimka dhammaadka sare. Badankeena annagu ma heli karno gacmaheena taleefanka muuqaalka ah ee kamarad RED, ama ARRI. Ma heysano raaxo leh oo lagu eegayo xargaha xargaha oo leh muraayado indho-shaxsi ah oo qarashka ku baxaya inta lagu guda jiro qolofta Miami. EditStock.com wuxuu ka caawiyaa inaga intiisa kale in aan helno xujooyinkeena ku saabsan sawirada sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka ee loogu talagalay ujeedada tababarka iyo tababarka.
Qalabka Naqshadaynta - Ma aha oo kaliya in dadka waawayn ee Rampant Design Tools ay bixiyaan darajo heer jaamacadeed oo horay loo abuuray soo jiidashada iyo saameynta fiidiyowga, waxay sidoo kale bixiyaan tababar bilaash ah iyo blog si ay uga caawiyaan gabdhaha xirfadlayaasha fiidiyooga inay qaataan fiidiyowkooda iyo saameynta gaarka ah u leeyihiin heer kale.
Wipster - Dib u eegis video iyo khabiiro ogolaansho ah, Wipster, waxay ku darsameen qalab waxtar leh oo lagu qiimeeyo waayo-aragnimadooda internetka, oo ay ka mid yihiin blog oo daboolaya mawduucyo badan oo aan si toos ah ula xidhiidhin dalabkooda. Baro inaad wax ka beddesho, toogto, iyo ganacsi ganacsi, dhammaantood adigoon iib ahayn.
Goobahaasi waa cirifka dabiiciga ah, laakiin waa inaan nagu mashquuliyaa ugu yaraan muddo yar inta aan helno meelaha ay si toos ah nooga hadlaan. Iyaga oo ku guul daraysta, inaad xor u noqotid si aad u ogaatid blogkan qoraaga. Waxaa laga yaabaa in aan si joogto ah loo cusbooneysiinin inta ka hartay boggaan intaa ka badan, laakiin waxay weli noqon kartaa madadaalo akhris.
Waa inuu leeyahay Tripod for Sawir-qaadayaasha Mobile
Isku-beddelashada Duubista Audio-ga si loogu isticmaalo MP3
Websaydh aan dhammeystirnayn oo si macquul ah u caan ah
Waa maxay Warbaahinta Mediaable (PMP)?
Kusoo Dabagalkaaga Sawir ah oo la xayeysiiso PluralEyes!
Talooyinka ugu sareeya ee ku saabsan Isticmaalka Macaamiisha Suuqa
Free Free Halloween Clip Art ee macmalkaaga
Ka bilow Bilaashka ciyaaraha
Sidee loo cabiraa Qaylada Gacan-joojinta Sameecadaha Kulanka
Sidee loo Dalbadaa Amniga Power Presentations
Xaqiijinta MD5 Jeegga Faylka
Baro Habka Saxda ah ee Isticmaalida Calaamadaynta Qormada ee Mawduuca
YPOPs! 0.9.5 - Yahoo Yahoo bilaash ah Ku soo dir boostada Barnaamijka POP Email Program
Sida Loo Isticmaalo Qalabka Lagu Qaadayo iPad-ga
Ka dhig Retro Sun Rays in Photoshop
Maxay tahay CDN (Shabakadda Bixinta Macluumaadka)?
Sida loo galiyo Sawir-In-Line on Yahoo! Boostada
Dib u eegid: Sony MDR-10RNC Gacan-ku-beddelka Gacmaha
Sida Loo Helo Tilmaamaha Darawalka iyo Waxyaabo ka badan Khariidadaha Google
Smile Jamaica Dib-u-eegida Kuliyadaha Kulanka
Muuqaal-Farsamooyinka Dheeraadka Ah Oo La Wareegay: Miyaad Iibsataa?
Rdio Songs on Spotify: Isticmaalida Qalabka Soo-Dejinta
Waraaqaha Cascading Cascading Style Cets (CSS)
Sida loo Isticmaalo Sawirada Sawirka Firefoxka
HTML Qeexida Tag